Misoro yeNhau dzaNhasi, China 14 Chikumi 2018
Misoro YeNhau Dzanhasi China Chikumi 14 2018
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikumi 14, 2018.
Mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, mutungamiri weMDC Alliance, Va Nelson Chamisa, mutungamiri weMDC-T, Muzvare Thokozani Khupe, mutungamiri we People’s Rainbow Coalition, Amai Joice Mujuru, mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance, VaNoah Manyika, muimbi, Brian Mteki nevamwe vanonyoresa kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Vaimbove gurukota rezvemigodhi, uye vari hama yaVaRobert Mugabe, VaWalter Chidhakwa, vanonyoresa kukwikwidza vakazvimirira kuZvimba South kuMashonaland West, ukuwo VaWebster Shamu veZanu PF vanonyoresa kukwikwidza chigaro chemumiriri weChegutu East, zvichitevera kubuda kwaita VaVengesai Musengi musarudzo iyi mushure mekunyengererwa kuti vaite izvi naVaPhillip Chiyangwa.
Muzvare Jessie Majome vanonyoresa kukwikwidza muHarare West vakazvimirira, umo vachakweshana naMuzvare Joanna Mamombe weMDC-T yaVaChamisa.
Muimbi Hosiah Chipanga anonyoresa kukwikwidza akazvimirira munzvimbo yeChikanga Dangamvura kwaMutare, iyo ine vamwe vanoti VaPropsper Mutseyami veMDC-T naVaEsau Mupfumi veZanu PF.
Bhora musangano kuMasvingo uko nhengo dzeZanu PF dzakakundwa musarudzo dzinonyoresawo kukwikwidza musarudzo, ukuwu MDC Alliance ichitadza kuwirirana pavanhu vekunyoresa izvo zvaita kuti mapato anyorese vanhu vawo zvisineyi nechibvumirano chekusakwikwidzana musarudzo.
Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka muBulawayo uko MDC Alliance inoona vanhu vebato rimwe chete vachinyoresa kukwikwidza muBulawayo Central
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm, nhasi tiri kutarisa kunyoreswa kwaitwa mazita evanhu kuNomination Courts munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose.